Zava-misy izany: ny iPhone 5 dia hamoy ny lanjany amin'ny fanombohana ireo iPhones vaovao | Vaovao IPhone
Pablo Ortega | | iPhone 5, Fantson'ny IPhone
Minitra vitsy lasa izay dia namoaka tao amin'ny Vaovao IPhone ny famerenana video sy ny famakafakana ireo iPhone 5s ary tao no nanoratany fanambarana izay niteraka resabe. Tao anatin'ireo fehin-kevitra tamin'ny famerenako ny horonantsary dia nanome toky aho fa tsy avy amin'ny iPhone 5 mankany amin'ny iPhone 5s akory no hevitra ratsy ary ho very maina ny iPhone 5. Betsaka no nandray ireo teny ireo ho toy ny hevitry ny olona, ​​saingy aza adino fa ny asantsika amin'ny tatitra an'ity karazana ity dia ny famakafakana ny angon-drakitra amin-kafetsena. Amin'ny maha mpanao gazety teknolojia ahy dia tsy ny tontolon'ny Apple ihany no ataoko, fa ny an'ny mpifaninana aminy ihany koa ary hanana ny fitaovana tiako indrindra aho, saingy ambonin'izany rehetra izany ny tanjoko dia ny manome fampahalalana kendrena.
Ary inona no lazain'ny angona? Ireo fitaovana ireo Apple no mitazona ny soatoavina indrindra rehefa mandeha ny fotoanaRaha atao teny hafa, dia mora kokoa ny mivarotra iPhone na iPad noho ny Samsung Galaxy S2 na S3. Mila mijery sehatra toy ny eBay, Craigslist, ary programa fanodinana fotsiny ianao mba hahitana fa ny vokatra Apple dia mitazona ny lanja indrindra. Fa maninona no lazainay amin'ny fanadihadianay video izany iPhone 5 dia ho very lanja? Eny, noho ny zava-misy tsotra izay Apple dia efa najanony ny varotra azy. Ny iPhone 5 dia nandao ny rojon'ny orinasa paoma ary nosoloin'ny iPhone 5c vaovao. Midika izany fa, afaka herintaona, ny iPhone 5c dia hanana lanjany bebe kokoa noho ny iPhone 5, mazava ho azy. Inona no fotoana tsara indrindra hivarotana ny iPhone 5 anao raha mikasa ny hanana iray hafa ianao ao anatin'ny fotoana fohy? Ankehitriny. Ny iPhone 5, rehefa mandao ny fivarotana Apple, dia ho ilay iPhone very lanja haingana kokoa.
Azo antoka fa ireo manana a IPad faha-XNUMX Tsy faly izy ireo fa namoaka ny iPad fahefatra iPad Apple antsasaky ny taona taty aoriana taorian'ny nahazoany ny iPad 3, nahoana? Satria ny iPad taranaka fahatelo dia very lanja fotsiny, tsy hoe satria nandefa iray vaovao i Apple taoriana kelin'izay, fa satria nijanona tsy namidy intsony ary noho izany dia kely kokoa no azo tamin'ny fivarotana azy manaraka.
Noho izany dia zava-misy fa ny iPhone 5 dia ho very lanja bebe kokoa noho ireo teo alohany amin'ny volana ho avy, fa tsy hevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 5 » Zava-misy izany: ny iPhone 5 dia ho very lanja amin'ny fanombohana ireo iPhones vaovao
Saitam dia hoy izy:
Heveriko fa ny mifanohitra amin'izay, amin'ny iPad raha misy fihatsarana .. miaraka amin'ny 5c ny hany zavatra nataon'izy ireo dia ny mitafy iPhone 5 misy akora ratsy kokoa (mahavariana kokoa), noho izany dia heveriko fa hivarotra tsara be ireo 5 ao Tanana faharoa ary tsara lavitra raha oharina amin'ny iPad lazainao.
Mamaly an'i Saitam
Quiroga dia hoy izy:
Nanazava tsara. Tsy afaka misalasala zavatra mazava loatra ianao.
Mamaly an'i Quiroga
Ary koa, manaraka ny fanjohian-kevitrao dia afaka mieritreritra isika fa ny 4S dia ho very lanja kely noho ny 5 ary amin'ny tsy eritreretiko fa hitranga.
Pepepon dia hoy izy:
Heveriko fa tsy ho very lanja be loatra ny iPhone 5, fa ny Apple TV voalohany na Mac mini misy DVD dia hitranga alohan'ny handaozan'i Apple azy ireo. Ny Iphone 5 dia manana zavatra tsy hananan'ny Iphone 5c, ireo fitaovana mendri-kaja nanaovana azy, ny kalitao sy ny faran'ireo (indrindra amin'ny Fotsy) izay azo ampitahaina amin'ny Iphone 5s ary mazava ho azy fa rafitra iray natao hamarana ny fomba Izy io dia ilay IOS7 izay mivelatra toy ny trondro anaty rano. Aleoko kokoa mihevitra fa ho vokatra tadiavina be eo amin'ny tsena faharoa,
Mamaly an'i Pepepon
Javi beni dia hoy izy:
Ary izany no antony hamafana ireo hevitra tsy mahaliana anao ... Na izany na tsy izany. Ny iPhone 5 dia ho sarobidy kokoa noho ny iPhone 5C. Izay rehetra anaovanao
Valiny tamin'i Javi Beni
Waner dia hoy izy:
Eny, aleoko iPhone metaly arivo heny noho ny plastika, tsy mino aho hoe very lanja izany, aleoko mitazona ny iPhone 5 noho ilay iray.
iPhone c izay hanana ny rehetra
World raha mbola finday tsara ny iPhone 3GS ary tsy amidy fa ny olona samy manana ny heviny 🙂
Mamaly an'i Waner
DeejayOscarBit dia hoy izy:
Aleoko ny iphone 5-ko, ny marina dia ilay iphone5c .. mazava fa handeha amin'ny 5s aho, nefa raha mijanona amin'ny 5 ^^ aho ary hihena ny vidiny .. mazava fa hampidina azy aho, ratsy kokoa tsy ho very kalitao .. ary ho an'ny tanana faharoa dia amidy tsara izy io ary tsy dia hihena ihany koa .. Mihevitra aho fa handeha ^^
Mamaly an'i DeejayOscarBit
Ptt dia hoy izy:
Hisy ny zava-misy raha voamarina izany. Mandritra izany fotoana izany, na tianao izany na tsia, dia hevitra, mihoatra na latsaky ny kalitao. Mazava ho azy, raha ny fahitako azy dia mandoa vola bebe kokoa aho amin'ny 5 fa tsy 5C
Mamaly an'i Ptt
Izany dia nitranga isan-taona tamin'ny iPhones sy iPads, zava-misy io.
Mifanohitra amin'ny tenanao ianao. "Izany dia nitranga isan-taona" (past tense). Izay hitranga amin'ny ho avy dia ho zava-misy rehefa mitranga izany, ary hifanindry amin'ny taona lasa na tsia. Ohatra: isan-taona dia miakatra ny vidin'ny trano. Mandra-pijanonany.
Antonio Marquez dia hoy izy:
"Ny iPhone 5, aorian'ny handaozana ireo magazay Apple, dia ho ny iPhone very vetivety haingana indrindra."
tsy mitovy izany. na maneho hevitra ratsy ianao. Tsy haiko izay tianao holazaina tamin'izay!
Valiny tamin'i Antonio Márquez
Yeeah dia hoy izy:
Ny vidiny faharoa, izay fomba tokana ahazoana azy, dia hiakatra. Ny antony hampihena ny vidiny dia amin'ny 5.
Ambony, raha jerentsika fa ny iphone 5c dia mitovy amin'ny ao anatiny ny 5 ary ivelany dia kalitao tsara kokoa…. Ho ahy dia ho gaga be raha toa ka mampihena ny vidin'ny 5 faharoa izy ireo
Valio i Yeeah
Da82 dia hoy izy:
Fomba fifamaliana tokoa izany, "izany dia satria miteny aho hoe, vanim-potoana, ary noho izany dia zava-misy izany!" Avelao aho hanome ny hevitro feno fanetrentena: Raha heveriko fa diso tanteraka ny adihevitrao, satria sambany hatramin'ny namoahana ny fanavaozana ny iPhone voalohany dia namoaka fantsona roa izy ireo fa tsy iray, ny iray amin'izy ireo dia mitovy singa amin'ny terminal. tamin'ny taona teo aloha, ary mety hahatonga izany, tsy toy ny tamin'ny taona hafa, ny terminal dia mihena ny lanjany. Mazava ho azy fa ho resy izy, saingy angamba noho ity hetsika nataon'i Apple ity dia nanao soa tamin'ny tompona iPhone 5 iray izy, dia ho very ny sandan'ny kaonty kokoa raha toa ka nivoaka 5 ny 400c, raha izany dia mifanaraka amin'ny tohan-kevitrao, fa tsy izany no izy.
Mamaly an'i Da82
Studio Ernesto dia hoy izy:
Manohana anao tanteraka aho, ampy Pablo, ampy izay ny News iPhone, miditra eto izahay satria ampahafantarinao anay foana ianao, miaraka amin'ny fomba fijery toa ny tsy misy tranokala hafa, fa ampy ny fialan-tsiny be dia be, vinavina maro ary miezaka ny ho bogeyman - sasao amin'ny teoriao. Talohan'ny naha-tranonkala manaja azy ireo, ary isaky ny mampalahelo ny mpamaky izy ireo. Izay hitanao amin'ny fanehoan-kevitra mitovy amin'izany, amin'ny habetsaky ny naoty navoakan'ny fanehoan-kevitra fa raha ny fiheveranao azy dia "fanehoan-kevitra troll" izy ireo. Mpamaky iray indray milaza aminao fa tsy hitondra fahasamihafana izany, fa nahatoky tamin'izy ireo nandritra ny taona maro, ary tato ho ato dia nijanona tsy nitsidika an'ity bilaogy ity aho noho ny votoaty ratsy sy ny adihevitra tsy misy dikany. Miarahaba an'i Nacho aho, ilay hany henoko nihaino ny hevitry ny mpamaky (toy ny tamin'ny fotoana nivoahan'ny iOS 7 ary nilaza taminay izahay mba hanam-paharetana). Ary ilay hany manana PANTS hanaiky izay mitranga eo amin'ny tontolon'ny Apple,
Valiny tamin'i Ernesto Estudillo
Marlon moreno dia hoy izy:
Tena mieritreritra ny mifanohitra amin'izay aho, ny iPhone 5 dia ekipa misy famaritana mitovy amin'ny 5c nefa manana fitaovana fananganana tsara kokoa, ary vao mainka aza tsy hamidin'i Apple bebe kokoa, hitazona ny vidiny ho lava kokoa izy, satria misy ihany tahiry sisa tavela ary tsy hamboarina intsony izy ireo ary iza no manala ary hamidy amin'ny mpanangona, ary na dia samy manana ny heviny aza ny tsirairay, na iza na iza manana loha 4 dia aleony mividy alimina amin'ny plastika, satria lafo kokoa izany. jerena
Valiny tamin'i Marlon Moreno
Jesusvzla dia hoy izy:
Fanontaniana iray izay mbola tsy novaliako taloha, raha manana iPhone 5 mbola eo ambany fiantohana aho ary simba, izay modely inona no hanovako azy ao amin'ny Apple Store?
Mamaly an'i Jesúsvzla
Jaime Rueda dia hoy izy:
Mbola mieritreritra aho fa ny iPhone 5 dia mbola hanana lanjany bebe kokoa noho ny 5c satria tsara kokoa ny fitaovana ary ankehitriny rehefa tsy hovidina intsony ny olona dia aleoko mividy 5 mahazatra raha oharina amin'ny 5c, vita amin'ny plastika ihany. ho an'ny fitaovany
Valiny tamin'i Jaime Rueda
tatoGonzalez dia hoy izy:
Mety hahavery ny lanjan'izy ireo izany, fa ny marina dia hoe raha namoaka iPhone misy fiasa mitovy amin'ny tamin'ny taon-dasa izy ireo, dia midika izany fa ny iPhone 5-ko dia ho lava kokoa noho ny iPhone hafa navoakan'ny Apple .. ary efa manana herintaona miaraka aminy aho ... antenaiko fa ho azo ny adin-tsaiko
Mamaly an'i tatoGonzalez
Freddy dia hoy izy:
Tsy hidina ny vidiny, eo anelanelan'ny fividianana plastika 5c sy ny tadiaviko ilay 5 tiako ho arivo heny amin'ny kalitao 5 sy ny hakantony, ka olona mahalala. Tadiavo ny 5. Ary mieritreritra fa tsy foronina intsony izy ireo. Mbola betsaka ny hotakiana. Ho toy ny singa fanontana voafetra izany, ny hevitro manetriketrika, manana iPhone 5 aho ary fantatro fa tsara lavitra noho ny 5c io. fiarahabana
Valiny tamin'i Freddy
Ny baolina mahay dia hoy izy:
Mba ho mpanao gazety dia tsy voafehinao loatra ny voambolanao. Ny zava-misy dia, araka ny asehon'io teny io ihany, zavatra efa nitranga, noho izany dia tsy mety ny miantso ny ho avy hetsika na toe-javatra ho zava-misy.
Valio ireo baolina marani-tsaina
plush dia hoy izy:
Raha ny iphone 5c amin'ny maha-izy azy dia dikan-tsoratry ny 5, tsy azoko an-tsaina ao anatin'ny herintaona hamidy indray fa 5c dia mihoatra ny 5
Mamaly an'i Teddy
tena marina! ankoatry ny zavatra hafa satria ny hardware dia hitovy taona (2 taona) ary fitaovana, loko sns ...
Tsy hitako fa ny iphone 5c no solon'ny 5.
Raha ny tokony ho izy, ny 5s no soloina fa tsy araka ny voalazanao ao amin'ny lahatsoratra fa izy no 5c, izay ho ahy dia dingana mihemotra ao amin'ny Apple ary ny vidiny ambany dia mahatonga ahy mandoa azy isan'andro.
Ny iphone 5 dia manana endrika sy estetika izay tsy hananan'ny 5c mihitsy. Ary raha mila mividy iray amin'ireo iPhones amin'ny tsena fanindroany aho dia tsy ilay 5c mazava ho azy.
Ity dia tonga amin'ny zavatra tena tsotra ary izany dia ny iPhone 5 manana fitaovana tsara kokoa noho ny 5c. Ary raha nesorin'izy ireo teny an-tsena izy io, dia ho an'ny zava-misy tsotra fa ny olona rehefa misafidy ny 5c sy ny 5 ho an'ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny, dia nisafidy ny 5 foana.
Palestino dia hoy izy:
Hitanao fa adala izay nanoratra an-tsoratra. "… Zava-misy fa ny iPhone 5 dia ho very lanja bebe kokoa noho ireo teo alohany amin'ny volana ho avy, fa tsy hevitra." Tsy miombon-kevitra tanteraka aho.
Valiny ho an'ny Palestiniana
Salvador AG dia hoy izy:
Ny iphone-ko ankehitriny dia iray amin'ireo lazainao fa natsahatra, saingy heveriko fa tsy dia hendry loatra ny hevitrao,
iPhone 5 White att 64Gb,
tonga ny 5c na 64gb, 🙂
Valiny tamin'i Salvador AG
Raha mamoaka plastika iPad 5 izy ireo, miaraka amin'ny endri-javatra mitovy amin'ny iPad 4, very lanja ve ny iPad 4-ko?
Ny iPhone 5 dia mitovy amin'ny an'ny 5S ety ivelany, izany no antony lehibe indrindra itiavan'ny olona ny 5 noho ny 5C. Raha ny fahitako azy dia ireo iPhones 5C no manadino ny haingana indrindra.
Connor dia hoy izy:
Heveriko toy ny maro aminareo. Hitako fa lojika kokoa fa mahazo sanda bebe kokoa izy, satria tsy ho afaka hividy azy io any am-pivarotana. Azo antoka fa ho tanjon'ny faniriana ho an'ny olona maro tia ny marika sy ny mpanangona. Hadalana izany raha ny vokatra misy fitaovana ratsy kokoa sy ny atiny izay azoko vidiana isaky ny iriko ao amin'ny magazay dia sarobidy kokoa noho ny iray hafa izay tsy azo atao afa-tsy ny tanana faharoa….
Mamaly an'i Connor
joagido dia hoy izy:
Eo anelanelan'ny 350-450 € dia ny sandan'ny tsena tanana ankehitriny amin'izao fotoana izao ny maodely 16GB, miankina amin'ny fanjakana, raha malalaka, sns.
Mamaly an'i joagido
Ho an'ny tonian-dahatsoratra: eny, tsy misy, majete, ny fiovana amin'ny 4S ka hatramin'ny 5 izay tianao hatao dia ho mora ho anao noho ny tendron'ny *****.
mahazo aina ny namana eh? tsara koa aho!
hamafa hevitra, hamafa ...
ho avy ianao hangataka mpanaraka amin'ny toerana hafa ...
flcantonio dia hoy izy:
Tena tsy azoko ny marina, maro amin'ireo fanehoan-kevitra napetraka eto. Ny lahatsoratr'i Pablo dia lahatsoratra misy hevitra mirindra, afaka manaiky isika na tsia, saingy tsy araka ny novakiako "satria hoy aho hoe, vanim-potoana" no nanjohy hevitra azy.
Izaho manokana, izay mitazona iPhones miasa roa foana, 5 sy 4S amin'izao fotoana izao, dia amidiko ny 4S, saingy tsy milaza aho hoe adala i Pablo na tsy marina, nolavina ny adihevitra, fa satria saika malalaka daholo ny olona rehetra manao izay heveriny fa mety.
Mamaly an'i flcantonio
Misy antony ve? lazao fa ny iphone5 dia hahavery lanja bebe kokoa noho ny mahazatra satria tsy zarain'i Apple intsony izany ary soloina modely mitovy endrika aminy (herintaona), miaraka amin'ny fitaovana sy famaranana ratsy kokoa, ary loko mahatsiravina ... dia ny hanomezana hevitra nanjohy hevitra?
Hevitra iray hafa "nanjohy hevitra": tsy misy iPhone2014C miaraka amina fitaovana 6S navoaka tamin'ny Mey 5, dia hidina ny vidin'ny 5C.
iray hafa: raha amin'ny Mey 2014 tsy misy fivoahan'ny 6C dia hirongatra bebe kokoa ny vidin'ny 5C!
sy ny sisa, hatramin'ny tsy manam-petra sy ny sisa !! 🙂
ianao dia efa mandeha amin'ilay zavatra mitovy amin'ilay "mpiara-miasa" amin'ny tranonkala eo akaikinao.
Zava-misy fa tsy misy lohany na rambony ny tohan-kevitrao ...
Andao hojerentsika hoe iza no mividy 5c faharoa ary afaka mividy 5 ...
Pablo Luján dia hoy izy:
Hadalana, noho ny tsy fahampian'ny vola, hividy ny iPhone 5 fotsiny aho ary tsy raharahako izany. 5c no vaovao amin'ny vidiny mitovy, ny famolavolana ny 5 dia avo telo heny noho ny 5c, ary Ary tsy maintsy milaza ihany koa aho fa tsy mahita fahasamihafana be eo amin'ny 5 sy 5
Valiny tamin'i Pablo Luján
Luigi Mexico dia hoy izy:
Ho ahy dia fanontaniana eny an-tsena izy ireo, tsy afaka mitazona ekipa iray manana toetra mitovy aminy izy ireo fa miaraka amina fitaovana maodely tsotra kokoa, na dia manana endrika tanora kokoa aza izy, misy ekipa roa, iray kanto sy mpanatanteraka amin'ny 5s sy ny hafa maoderina sy tanora amin'ny 5c, ka mahasakana azy ireo. Ilay iray izay tsy nandany vola be loatra dia mifanaraka amin'ny toetra roa amin'ny fahombiazana, ny hatsarana ary ny vidiny ka izany no antony nanesorany azy ireo teny an-tsena ary noteren'izy ireo ianao hividy raha manana ianao vola ampy amin'ny 5s fa raha tsy zakanao ny 5c ho an'ireo tsara vintana nividy ny 5 na aza manahy satria afaka taona maro vao sitrana i Apple amin'ity hadisoana ity.
Valiny amin'i Luigi Mexico
Fanontaniana. Rehefa hidina ny vidin'ny iphone 5 tanana faharoa, rehefa mivoaka ilay iphone vaovao (ilay heverina ho iPhone 6, hoy aho mazava ho azy satria miaraka amin'ireo anarana ireo, Apple dia afaka mametraka olona, ​​toy ny ipad 3 izay nolazain'ny rehetra ary tamin'ny farany Nametraka ipad taranaka fahatelo vaovao izy ireo, izay manana an'io ary nahatsapa ho mahatsiravina aho ny haka antsasaky ny taona aorian'ny famoahana azy, fa ny ipad 3 koa tena tsara ary faly aho XD) na rehefa manomboka mivarotra izy ireo ny iphone ao amin'ny magazay ary te haka iray aho ary tsy fantatro raha mbola hiandry ny famoahana azy amin'ny volana septambra aho, nambaran'izy ireo mihoatra ny zavatra hafa rehetra, na rehefa manomboka mivarotra azy ireo any Espana izy ireo. Misaotra betsaka mialoha.